ဒူးမနာအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
1. ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် များတဲ့သူတွေမှာ အဆစ်နာရောဂါ ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာကြောင့် မိမိအသက်အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာ ဖိအားဒဏ်ကို လျှော့ချနိုင်၍ ဒူးနာခြင်းမှလည်း ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် ဖိနပ်များကို ရွေးချယ်၀ယ်ယူပါ။ မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့ဖိနပ်တွေဟာ ခြေထောက်မျှခြေကို ထိန်းထားပေးနိုင်တာကြောင့် ဒူးနာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်မီ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းကို မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပေါင်ရင်းနဲ့ ရှေ့နဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဆွဲဆန့်လိုက်ပါက အရွတ်တွေပေါ်မှ တင်းအားကို လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် ဒူးခေါင်းပေါ်သို့ သက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. ဒူးခေါင်းပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုနည်းပါးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပြုလုပ်ပါ။ ရေကူးခြင်း (သို့) ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။
5. အလေးတုံးများကို မ,တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ပြုလုပ်လိုပါက ဒူးခေါင်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ခြေသလုံးကြွက်သားများကို သေချာစွာ ဆန့်တန်းထားခြင်းဖြင့် ဒူးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အလေးတုံးများနဲ့ကစားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးမပြုလုပ်မီ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် သေချာစွာတိုင်ပင်၍ ဒူးခေါင်းနာကျင်မှုကို ကာကွယ်ရန် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းများကို ကြိုတင်သိထားသင့်ပါတယ်။
6. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို မလျှော့ချပါနှင့်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို လျှော့ချလိုက်ပါက အင်အားချိနဲ့လာကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ်။
7. အားကစားပြုလုပ်ခြင်းကို ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြုလုပ်မိပါစေနှင့်။ ဒူးခေါင်းနာကျင်မှု မဖြစ်စေရန် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ဖြင့် တစ်ဆင့်ချင်းတိုးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
8. လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံး ခံယူရန် စဉ်းစားပါ။ ဒူးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးပါက ဆရာ၀န်ရဲ့အကူအညီဖြင့် မိမိနှင့် သင့်တော်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။